Google Fit: Health and Activity Tracking 2.20.36-130 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.20.36-130 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
သစ်ကို Google ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်အတူကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းနှင့်ပိုမိုတက်ကြွစွာဘဝမှရယူပါ!
ဒါဟာသင်ကျန်းမာနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လောက်သို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှု၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုကိုသိရန်ခက်ပါပဲ။ Move မိနစ်နှင့်နှလုံးအမှတ်: Google ကြံ့ခိုင်မှုသင်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီနိုင်မသစ်နှစ်မျိုးကိုလှုပ်ရှားမှုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်စေဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကနှင့် American Heart Association (အေ့ဟေ) နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဒါကြောင့်ဖွင့်
ဒါကြောင့်သင့်ကျန်းမာရေးမှကြွလာသောအခါ, ပိုပြီးရွှေ့နည်းထိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုအဘို့အရွှေ့မိနစ်ဝင်ငွေနဲ့အစားဓာတ်လှေကား၏လှေကားတာ, ဒါမှမဟုတ်အစားကော်ဖီလမ်းလျှောက်ကျော်မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူတက်ဖမ်းကဲ့သို့သင်၏တစ်နေ့တာတစ်လျှောက်လုံးအသေး, ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ရ။
သင်၏နှလုံးသည်သင်၏နှလုံးနှင့်စိတ်ကိုများအတွက်ကြီးမားတဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိခက်ခဲချပေးရလှုပ်ရှားမှုများ။ သင်သည်သင်၏ခွေးလမ်းလျှောက်အခါအရှိန်အဟုန်တက်ကောက်နေကဲ့သို့အလယ်အလတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်မိနစ်အဘို့တယောက်နှလုံးပွိုင့်ဝင်ငွေနှင့်အပြေးနဲ့တူပိုပြီးပြင်းထန်သောလှုပ်ရှားမှုများကိုအဘို့ကို double အချက်များပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအေ့ဟေနှင့် WHO က, နှလုံးရောဂါ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချအိပ်ပျော်ခြင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ခြုံငုံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာကိုတိုးမြှင့်ပြသသောကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပမာဏ, အကြံပြုရဲ့ရောက်ရှိဖို့သွက်လမ်းလျှောက်ငါးရက်ပဲမိနစ် 30 တစ်ပါတ်ကြာပါသည်။
သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ် WATCH, မှသင်၏လေ့ကျင့်ခန်းခြေရာခံခြင်း
သငျသညျကငျြ့သုံးသည့်အခါချက်ချင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို Get နှင့်သင့်ပြေးဘို့ကို real-time စာရင်းဇယားကိုကြည့်ပါ, လမ်းလျှောက်ခြင်း, စက်ဘီးစီး။ Fit ကိုသင့်ရဲ့ Android ဖုန်းရဲ့ sensor များကိုသုံးပါသို့မဟုတ်သင့်အမြန်နှုန်း, အရှိန်အဟုန်, လမ်းကြောင်းများနှင့်ထို့ထက် ပို. မှတ်တမ်းတင်ဖို့ Google ကစမတ်နာရီရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာများအားဖြင့် OS ကို Wear ပါလိမ့်မယ်။
နှလုံးအမှတ်အဘို့သင့်နေ့စဉ်တိုးတက်မှုမြင်မိနစ်ရွှေ့ပါ။ နေ့ရက်တိုင်းသင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုအစည်းအဝေး? သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ရည်မှန်းချက်တိုးတက်မှုကိုအပေါ်အခြေခံပြီး, Google ကြံ့ခိုင်မှုကိုသင်ကျန်းမာနှလုံးနှင့်စိတ်ကိုအောင်မြင်ရန်ကိုယ့်ကိုကိုယ်စိန်ခေါ်စောင့်ရှောက်နိုင်အောင်သူတို့ကိုသင်ချိန်ညှိကူညီပေးပါမည်။
အားလုံးသင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ COUNT ဦးအောင်လုပ်ပါ
သငျသညျကို run, လမ်းလျှောက်, ဒါမှမဟုတ်စက်ဘီးတစ်နေ့တာအတွင်း, သင့် Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Google စမတ်နာရီအားဖြင့် OS ကို Wear အကယ်. အလိုအလြောကျသင်တိုင်းပြောင်းရွှေ့များအတွက်အကြွေးရဖို့သေချာစေရန်သင်၏ Google Fit ဂျာနယ်ရန်သင့်လှုပ်ရှားမှုများ detect နှင့် add ပါလိမ့်မယ်။ ယလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားကိုခံစားကြည့်ပါ? ပိလတ်မင်းလှေလှော်, ဒါမှမဟုတ်ချည်ငင်နဲ့တူလှုပ်ရှားမှုများများစာရင်းကိုကနေရွေးချယ်ပါ, Google ကြံ့ခိုင်မှုအပေါငျးတို့သနှလုံးသားအမှတ်ကိုခြေရာခံနှင့်သင်ဝင်ငွေမိနစ်ရွှေ့ပါလိမ့်မယ်။
အကူအညီသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးသင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုချိန်ညှိတူသောစိတ်ကြိုက်အကြံပေးချက်များနဲ့ Actions နည်းပြရယူပါ
Fit သင်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုတစ်ဘက်စုံအမြင်ပေးရသင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံး apps များနှင့် devices များအများအပြားကနေအချက်အလက်ကိုပြသနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကား, Google, Nike က + Runkeeper, Strava, MyFitnessPal, Lifesum, အခြေခံ, အန်းဒရွိုက်အဖြစ်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အတူ, Xiaomi က Mi တပ်သားနှင့်ပိုပြီးအားဖြင့် OS ကို Wear, Lifesum ပါဝင်သည်။
Fit နှင့်ဒီဇိုင်းဂျာနယ်၌သင်တို့၏ဘက်ပေါင်းစုံ app များကိုဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုသမိုင်းတစ်လျှပ်တစ်ပြက်ကြည့်ရှုပါ။
Google ကြံ့ခိုင်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါမှာထောက်ခံ apps များစာရင်းတစ်ခုကိုမြင်ရ: www.google.com/fit
APK ဗားရွင္း 2.20.36-130